Soo Jeedinta Qorshaha Adeegga 2022
ESPAÑOL | TIẾNG VIỆT | 简化字 | РУССКИЙ | ENGLISH
Ku sii lug lahow
Sound Transit wuxuu raadinayaa talooyin dadweyne oo ku jeeda Qorshaha Adeegga 2022. Ka qeyb qaado sahanka hoose ilaa 11:59 galabta Agos 22, ka soo qeyb gal aqalka furan ee muuqaalka ah Agos 11, usoo iimeel garee talooyinkaaga servicechanges@soundtransit.org, Ama talo ku dhaaf adigoo soo wacaya 1-866-940-4387. Waxad sidoo kale isku qori kartaa talooyinka afka laga sheego ee kulanka dhageysiga guud Agos 12.
Muxuu yahay qorshaha adeegga sannadka?
Dhinaceena Sound Transit, waxanu qiimeynaa sida adeegga loo qabto sannad kasta waxana soo jeedinnaa isbeddello lagu hagaajinayo waxqabadka, looga jawaabayo sida xaaladda raacistu tahay iyo in si wanaagsan loo isticmaalo ilaha canshuur bixiyeyaasha.
Waxana saadaalineynaa in isbeddelani la soo jeediyey ee ku jira howlaha qorshe sannadeedkeena, laakinse waxanu u baahan nahay fakarkaaga si aad noogu caawinto soofeyntooda iyo hagaajintooda.
Waxanu qirsan nahay in sanadkii la soo dhaafay uu ahaa mid caqabado badan. Hey’adaha gaadiidka ee guud ahaan gobolka, waxey yareeyeen adeegga xilligii cudurka saf-mareenka ahaa. Gobol ahaan dib usoo noqoshada waxana hore u eegi doonnaa sannadka soo socda, waxana kugu casumeynaa inaad wax ka ogaato isbeddelada aannu ka soo jeedineyno adeegyada 2022. Talooyinkaaga soo jeedinta Qorshaha Adeegga waxey caawini doontaa qaabeynta sida adeeggu u ekaanayo sannadka soo socda.
Maxaa ka soo muuqda halka ishu gaarto ee adeegga 2022?
Waxaan ka fakareynaa isbeddel lagu sameeyo baska deg-dega ee ST Express iyo Sounder South iyadoo raacayaashu ay dib usoo laabanayaan guud ahaan gobolka inta aan sii wadno dib uga soo kabashada cudurka karoona. Waxanu ka jawaabeynaa kororka inagoo diiradda saareyna sinaanta soona jeedineyna kororsiimo adeegga ah halka dadku badankiisu uga baahan yihiin, gaar ahaan Koonfurta King and Kowntiga Pierce, halkaasi oo raacitaanku kaga adkeysi badnaa marka loo eego qeybaha kale ee gobolka.
Waxaa intaa dheer, 2022 waxey tilmaan u noqon doontaa furitaanka Hilltop Tacoma Link Extension. Fiditaankani wuxuu keeni doonaa isku xir cusub oo gudaha laga bilaabo Tacoma Dome Station ilaa hey’adaha caafimaadka waaweyn ee ku yaal xaafadda Hilltop.
Noo sheeg waxey kula tahay ka hor Agos 22.
Noo soo iimeel-garee:
Na soo wac oo noo dhaaf talo guud:
Ka soo qeyb gal Aqalka Furan ee Muuqaalka ah:
Agos 11 saacaddu 6da galab.
Ka soo qeyb gal Dhageysiga Kulan Dadweyne:
Agos 12 saacadda 11ka subax.
Yoolka Qorshaha Adeegga 2022
Dib uga dhis COVID-19 una jawaab qaabka cusub ee isu socodka click for more details
Sannadkii la soo dhaafay Sound Transit waxey yareysay ama laashay adeegga xilliga saacadaha la safro iyadoo sii heysaneysa dhammaan isku xirka maalinta. Baaritaanka imika wuxuu muujinayaa in dadka qaar qorsheysanyaan iney ka shaqeeyaan xafiiska in ka yar sidii hore, haddaba dib u dhiska COVID-19 waxey na siineysaa fursad lagu abuuri karo shabakad diiradda saarta dhamaan adeegyada maalintii ee u adeegaya hadafyo socdaallo kala duwan.
Adeegyada Qorshaha 2022 wuxuu soo jeedinayaa kordhinta adeegga maalintii oo dhan, oo ay ku jirto durhurradii, galbihii, iyo maalmaha dhamaadka toddobaadka, halkii dib loo soo celin lahaa saacadihii mashquulka ee la laalay oo kaliya (5ta ilaa 9ka subax iyo 3da ilaa 7da fiidkii). In kastoo saacadaha mashquulka ay lahaan doonaan socod badan, kuwo dheeraad ah oo duhurradii, galbihii iyo dhamaadka toddobaadka waxey oggolaan doonaan dabacsanaan ballaaran oo saacadaha shaqada waxeyna u daneyn doonaan raacayaasha u socdaalaya arrimo kale.
Qaar saacadaha khadadka kaliya marka shaqadu badan tahay sida Ruudadka 541, 544, 555 iyo 567 waxey baaqi ku ahaan doonaan laalnaantooda sababtoo ah ruud dhinac socda oo maalintii oo dhan ah ayaa qabanaya shaqadooda jidadka ay maraan, inkastoo Khadka dhinac socda uu lahaan karo istaagyo badan ama u baahan kara ku wareegis aadaya ama ka imanay tareenka fudud ama adeeg kale oo ST Express ah.
Diirad saaridda sinnaanta click for more details
Qodobkeena 2019 Title VI ee Qiimeynta Adeegga wuxuu arkay in qaar kamid ah khadadka ST Express ee u adeega dadka tabartooda dhaqaale yar tahay ama laga tiro badan yahay, gaar ahaan kuwa ku nool Koonfurta King iyo Kowntiga Pierce, iyo adeegga Sounder South ay dib u dhacsanaayeen marka loo eego maalgelinta, iyo in sababtaa darteed ay lahaayeen sugitaan waqti dheer iyo waqtiga imaatinka ay ku liiteen marka loo eego adeegyada meelaha kale.
Qorshaha Adeegga 2022 wuxuu diiradda saarayaa in la gaaro adeeg loo siman yahay dhammaan gobolka. Qorshaha, waxan soo jeedineynaa in loo kordhiyo adeegga bas ee Tacoma iyo Federal Way ST Express 15 daqiiqo kasta maalintii oo dhan, oo ay ku jirto dhamaadka toddobaadka, si la isula simo heerka adeegga ee khadadka ka shaqeeya Bariga King, Wuqooyiga King iyo Kowtiyada Snohomish.
Dhis shabakada mustaqbalka ST click for more details
Kaalinta ST Express waxey isla isbeddeli doontaa mar kasta oo mustaqbalka tareenka fudud fido, iyadoo maalgelin ku sameyneysa gaadiid tayadiisu aad u sarrreysa.
Waxanu u furi doonnaa adeegga Link dhinaca Eastside sanadka 2023 iyo ilaa Redmond, Federal Way iyo Lynnwood 2024. Kordhinta heerka adeegyada basaska duhurradii iyo dhamaadka toddobaadka si ay ula sinmaan Link waxanu abuuri doonnaa shabakad gaadiid tayo leh ee gobolka ah oo baasanjerradu ku tiirasanaan karaan maalintii oo dhan, maalin kasta.
Si aad u aragto maabka adeegga, halkan guji.
Isbeddellada ST Express
Adeegga bas ee Sound Transit ee isku xira halbowlayaasha gobolka ee Kowntiyada Pierce, King iyo Snohomish.
Route 535 – Lynwood ilaa Bellevue click for more details
Kordhinta adeegga dhamaadka toddobaadka 30kii daqiiqaba mar iyo bilaabidda adeeg Axadda ah.
(Guji si aad u ballaariso muuqaalka)
La soo jeediyey
Maalmaha dhamaadka toddobaadka
Subaxa hore (ka hor 6da subax)
Socodka Subaxda (6da ilaa 9ka subax)
Duhurka (9ka subax ilaa 3da galab)
Socodka habeenkii (3da ilaa 6da galab)
Fiidkii (6 ilaa 10 galab)
Fiidka dambe (ka dib 10ka fiidkii)
*Waqtiyada oo dhan waa qiyaas
Ruudka 550 ilaa Bellevue ilaa Seattle click for more details
Kordhinta adeegga Axadda ilaa 15 daqiiqo kasta xilliga maalintii iyadoo dib loogu qoondeynayo qaar socdaallada dhamaadka toddobaadka. Adeegga maalmaha toddobaadka waxey shaqeyn doonaan qiyaas 8 ilaa 10 daqiiqo xilliyada shaqadu badan tahay iyo 15kii daqiiqo duhurradii iyo fiidkii.
Route 560 – West Seattle ilaa SeaTac ilaa Renton. click for more details
Kordhin adeegga dhamaadka toddobaadka ilaa 30 daqiiqo kasta. Isbeddel la’aan adeegyada maalmaha toddobaadka.
Route 574 – Lakewood ilaa SeaTac click for more details
Fidinta saacadaha adeegga iyadoo adeegga la bilaabayo xilli hore lana dhameynayo adeegga goor dambe si si wanaagsan loogu adeego shaqaalaha Ayrboorka SeaTac.
Socodka habeenkii (3da ilaa 6da galab)>Evening commute (3-6 p.m.)
Route 577 – Federal Way ilaa Seattle click for more details
Kordhinta adeegga ilaa 15 daqiiqo ama ka wanaagsan, maalintii oo dhan, maalin kasta, inta u dhaxeysa Federal Way iyo Seattle (oo lagu lamaaniyey socodka joogtada ah ee 578)
(lagu lamaaniyey socodka joogtada ah)
Khadka 578 – Puyallup ilaa Seattle click for more details
Kordhinta adeegga dhamaadka toddobaadka ilaa 30 daqiiqo.
Khadka 590 – Tacoma ilaa Seattle click for more details
Kordhinta adeegga ilaa 15 daqiiqo ama ka wanaagsan, maalintii oo dhan, maalin kasta, inta u dhaxeysa Tacoma iyo Seattle (lagu lamaaniyey socodka joogtada 594)
Route 592 – DuPont ilaa Lakewood Seattle click for more details
Ku daridda joogsiga Tacoma Dome si loo wanaajiyo ku xirnaanshaha Hilltop Tacoma Link Extension iyo khadadka kale ee Pierce Transit iyo in la hagaajiyo isku xirka gudaha ee Pierce County. Tani waxey ku soo kordhineysaa isku xir toos ah ee dhex mara DuPont iyo Tacoma, oo imika gaadiidka dadweynuhu aanu ka shaqeynin.
IWaxa intaa dheer, adeeggu wuxuu ka howl gali doonaa Seattle iyadoo uu marayo SODO, Stadium iyo xarumaha tareenka fudud ee xaafadda International District-Chinatown (iyadoo uu sii wadayo u adeegidda istaagyada hadda ee 4th Avenue) .
Isbeddellada Sounder South
Adeegga tareenka Sound Transit ee dadka qaada wuxuu ka howl galaa inta u dhaxeysa Lakewood iyo Seattle maalmaha toddobaadka.
Laga bilaabo Sebtember 2021, Sound Transit wuxuu ku soo kordhin doonaa tareenka fudud magacyo khadad cusub iyo adeegga Sounder. Sounder South wuxuu noqon doonaa S Line, iyo Sounder North wuxuu noqon doonaa N Line.
Sounder Transit wuxuu ka fakarayaa soo celinta adeeg si uu uga shaqo galo ilaa 13 socdaallo oo hore iyo gadaal ah ka hor Sebtember 2022. Iyadoo adeegga Sebtember 2021 is beddelayaan, Sound Transit wuxuu soo celin doonaa Train 1507 (2:35 galabtii laga bilaabo Seattle ilaa Tacoma) iyo tareenkiisa did u noqoshada (1520, 4:06 galab laga bilaabo Tacoma ilaa Seattle). Qorshaha adeegga la soo jeediyey wuxuu ku dhisnaan doonaa 2022 arrintaa wuxuuna dib ugu soo celin doonaa adeegga Sounder South heerkii karoona ka hor.
(Halkan guji si aad u ballaariso)
Isbeddelka Tacoma Link
Adeegga tareenka fudud ee Tacoma wuxuu imika ka howl galaa inta u dhaxeysa Tacoma Dome iyo xaafadda Theater District, iyadoo lix xarumood cusub furmi doonaan sanadka cusub.
T Line (Tacoma Link) wuxuu furmi doonaa Hilltop Extension bartamaha 2022. click for more details
Durba marka uu furmo Hilltop Tacoma Link Ext. 2022, Sound Transit wuxuu ka fakari doonaa kordhinta socod joogto ka bilaabata 12 daqiiqo ilaa 10 daqiiqo.
Wax badan kaga ogow mashruuca halkan.
Waxanu dhameystiri doonnaa ka baaraan degidda Title IV oo qeyb ka ah dadaalka Adeegga Qorshaha 2022.
Chúng tôi sẽ hoàn thành phân tích Tiêu đề VI như một phần của quá trình Kế hoạch Dịch vụ 2022. Wax badan kaga ogow halkan.
2022 sahanka Adeegga Qorshaha
Khudbadaha kooban ee Hey’adaha Ku Saleysan Bulshada
Juulay ilaa Agos 2021
Xilliga Talo- dhiibashada Dadweynaha
Aqalka Furan ee Onleen iyo sahan
Aqalka Furan Muuqaalka ah ee Agos 11 saacadda 6da galab.
Aqalka Furan Muuqaalka ah ee Agos 12 saacadda 11ka subax.
Agos ilaa Sebtember 2021
Dib u eegis talo dhiibashada bulshada iyo ku noqodka Adeegga Qorshaha 2022
Hirgelinta socodka howlaha Sound Transit Board
Adeegga Qorshaha 2022 ugu dambeeya ka dib
Noo soo iimeel-garee: servicechanges@soundtransit.org
Na soo wac oo noo dhaaf talo guud: 1-866-940-4387
Ka soo qeyb gal Aqalka Furan ee Muuqaalka ah: Agos 11 saacaddu 6da galab.
Ka soo qeyb gal Dhageysiga Kulan Dadweyne: Agos 12 saacadda 11ka subax.
Isku qor helidda ogeysiino: soundtransit.org/alerts
Su’aalo guud? Nala soo xiriir:
Adeegga Macaamiisha Sound Transit:
Na soo wac: 1-800-201-4900 , TTY Relay 711
Gacan siin ma uga baahan tahay onleen ama kulamada si qof ahaan ah?
Rabitaanka inaad wax ogaato:
Telefoon: 1-800-201-4900, TTY Relay 711
Isniin - Jimce, 7 subax ilaa 7da galab.
Weydiimaha Guud ee Raacayaasha:
Telefoon: 1-888-889-6368, TTY Relay 711
Wac ama tekist Amniga 24 saac /7da maalin: 206-398-5268
webseydkan la wadaag dadka kale